Dibadbax Maanta Muqdisho ka dhacay. | Baydhabo Online
Dibadbax Maanta Muqdisho ka dhacay.
Dadweyne fara badan oo isaga kala yimid 16-ka Degmo ee Gobolka Banaadir ayaa maanta waxa ay Banaanbax balaaran oo ay kaga soo horjeedaan xukunka Dowladda Hindiya ay ku ridday Dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa maanta ka dhacay Xaafado ka tirsan Magaalada Muqdisho.
Banaanbaxa ayaa xoogiisa wuxuu ka dhacay Wadada Warshadaha, Xaafada Towfiiq, Wadada Black Sea, Degmada Boondheere iyo xaafado kale, iyadoo dadka Banaanbaxa dhigayay ay ku qeylinayeen erayo ay kaga soo horjeedaan Dowladda Hindiya.
Waxa ay sheegeen in Dowladda Hindiya ay ku qaldan tahay falkan ay xukunka ugu ridday Dhalinyarada Soomaaliyeed, taasina aysan u dulqaadan doonin hadii ay yihiin shacabka Soomaaliyeed.
Dadka Banaanbaxa dhigayay ayaa Dowladda Soomaaliya iyo Hay’adaha Dowladda ugu baaqay in ay ka hortagaan falkan ay ku dhaqaaqday Dowladda Hindiya, sidoo kalena xaaladooda lala socdo Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada Dalka Hindiya.
Dhalinyaradan Soomaaliyeed ee ku xiran Wadanka Hindiya ayaa gaaraya 119-Ruux, kuwaasi oo badankood hal waqti ay Maraakiibta Hindidu ka qabteen Badda Soomaaliya 2011-kii, tan iyo waqtigaasna Maxkamad lama soo taagin.